Izindiza ze-Air Berlin zise-Iceland: Izindiza ezishaqwe iziphathimandla
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Izindiza ze-Air Berlin zise-Iceland: Izindiza ezishaqwe iziphathimandla
Airlines • Airport • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zaseJalimane • Izindaba ze-Iceland Breaking • Investments • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
I-Duesseldorf eya e-Iceland nge-Air Berlin yaba ugibe lwendlela eyodwa kubagibeli abaningi abangasoliwe. Osebenza esikhumulweni sezindiza sase-Iceland u-Isavia ngoLwesine wenqabile ukuthi ibhanoyi le-Air Berlin lihambe, ngenxa yokuthi inkampani yezindiza yaseJalimane eswele imali isabakweleta imali.
U-Isavia uthe esitatimendeni esikuwebhusayithi yakhe ukuthi lesi senzo “siyinsiza yokugcina yokuqinisekisa ukukhokhelwa kwezinsizakalo esezinikeziwe”. Isitatimende sivumile ukuthi lesi sinqumo sizoba nomthelela omubi kubagibeli abahamba ngendiza nenkampani.
I-Air Berlin yafaka isicelo sokuqothuka ngo-Agasti ngemuva kwezinyanga eziningi zamahlebezi mayelana nezinkinga zezimali. Inkampani yezindiza ithe ngeke ihambe noma yiziphi izinkonzo ngemuva kuka-Okthoba 28.
Ngokusho the Ingosi ye-inthanethi ye-Turisti.is, indiza ibisendleleni ebheke eDüsseldorf kanti abagibeli abathathu basale bebambe ongezansi ngenxa yesinqumo. Kubikwa ukuthi sekungokwesibili iziphathimandla zase-Iceland zishaqa ibhanoyi.
Umkhulumeli we-Isavia ubengeke atshele The Local ubukhulu besikweletu esikweletwa yi-Air Berlin. Uzophawula kuphela ngokuthi “sizobona esikubonayo” ukuthi inkampani ingayithola kanjani ijethi yayo.